Izocubungula konke iKhomishini | IOL Isolezwe
Izocubungula konke iKhomishini
Isolezwe / 24 August 2012, 2:17pm /
862 AMCU members and members of the community sing during memorial service for the victims of the Marikana Massacre. 230812 Picture: Boxer Ngwenya
UMENGAMELI Jacob Zuma izolo umemezele indlela iKhomishini eqokelwe ukucubungula udaba lwesibhicongo sasemayini iMarikana ezosebenza ngayo. Ekhuluma esithangamini sabezindaba esibizwe isigubhukane ePitoli izolo, uZuma uthe ikhomishini isungulwe ngokulandela umthetho ka-84 wesigaba sesibili somthetho-sisekelo wezwe wonyaka ka-1996.
Uthe phakathi kokunye, iKhomishini izobheka indlela okuthinteke ngayo umphakathi owakhele le mayini, umphakathi wezwe lonke ngisho nowamazwe omhlaba ngokwenzeka kwalesi sibhicongo esishiye abantu abangu-34 beshonile, kwalimala abangu-70 kwaboshwa abangaphezulu kuka-250.
USihlalo wale Khomishini kuzokuba yiJaji laseNkantolo ePhakeme yokweDluliswa kwamaCala eselathatha umhlalaphansi, u- Ian Farlam.
IJaji Farlam lasebenza njengejaji ezindaweni eziningi okubalwa kuzo i-Orange Free State Provincial Division, iCape Provincial Division neSupreme Court of Appeal.
UFarlam uzobe ebambisene no-Adv Bantubonke Tokota, oseke wabamba njenge-Jaji eNkantolo yezabaSebenzi e-Eastern Cape naseTransvaal Provincial Division no-Adv Pingla Hemraj oseke wabamba njenge-Jaji eNkantolo enkulu yaseThekwini, eMgungundlovu, Grahamstown nasePort Elizabeth.
Le Khomishini izobheka lokhu okulandelayo:
Indlela enze ngayo amaphoyisa, icubungule ukuthi asebenzise izindlela ezifanele, alandela nemigudu eyiyo yini ukuzama ukuxazulula isimo. Lapho kuhlanganisa nokubheka nendlela izikhulu zemayini ezihambise ngayo ukuthi ingehlelekile yini. Nezinyunyana zizobhekwa.
Izobheka nokuthi izikhulu zaseLonmin zibhekane kanjani nesimo sokwesatshiswa nokubheduka kodlame emagcekeni ale mayini.
Izobheka nokuthi ngabe imayini ibiqashe onogada abenele yini ukubhekana nesimo ebesimanzonzo, kubhekwe nokuthi ikhona yini imizamo inkampani eyenzile ukuze kuphephe abasebenzi bayo kunqandeke nalesi simo.
Kuzobhekwa nezenzo zeNational Union of Mineworkers ne-Association of Mineworkers and Construction Union.